EYONA NDAWO ILUNGILEYO YOKUHLAMBELA (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Eyona ndawo ilungileyo yokuhlambela (iingcamango zoyilo)
Eyona ndawo ilungileyo yokuhlambela (iingcamango zoyilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwizitethi zokuhlambela ezifanelekileyo kubandakanya imibono yoyilo, kunye nezinto ezithandwayo zesithuba sakho.
Xa uyila indlu, igumbi lokuhlambela ligumbi oza kulisebenzisa yonke imihla, amaxesha ngamaxesha, ke oko kuyenza ibaluleke kakhulu! Imiphezulu yeetafile ziindawo ezisetyenziswa kakhulu ezifuna ukuba zomelele kwaye zikhangeleke. Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa ukhetha ukuba zeziphi izinto ezizakulungela indawo. Ezinye zezi zinto zibandakanya: i-laminate, i-tile, ukhuni, i-granite, umphezulu oqinileyo okanye i-quartz.
Izinto eziPhezulu zeComputer yeComputer
Ukukhetha eyona nto ilungileyo kwindawo ekusetha kuyo isitayile sokuhlambela kuhlala kuxhomekeke kukhetho lwakho kunye nesitayile oya kuso. Apha ngezantsi sigubungela ezona zinto zidumileyo zezinto zangasese ezingento kunye nezinye izinto ezilungileyo nezingalunganga zohlobo ngalunye. Ukufunda ngakumbi malunga iipompo zangasese ndwendwela eli phepha.
Iitafile zegumbi lokuhlambela leGranite
Imiphezulu yeetafile zekamelo lokuhlambela zwi
Indawo esisangqa marble kwigumbi lokuhlambela
Imiphezulu yeetafile yokuhlambela elaminethiweyo
Imiphezulu yeetafile umphezulu Wood
Iiceramic & Porcelain Tile imiphezulu yeetafile
Ilitye eliGqwesileyo leeComputer zokuhlambela
Umthi ogqwesileyo kumacwecwe eendawo zokuhlambela
I-Granite inezinto ezininzi eziluncedo ezenza ukuba ibe sisixhobo esibaluleke kakhulu kwiitafile ngokubanzi, kodwa ngakumbi izindlu zangasese. I-Granite yindawo eqinileyo eya kuba yindawo ethembekileyo, nangona imanzi. Liqinile kwaye akukho xhala lokuqhekeka okanye ukophuka.
I-Granite lilitye lendalo, ayisiyomveliso eyenziwe ngumntu enjenge-laminate okanye indawo eqinileyo. Oku kuyibeka kudidi oluncinci lwefuthe kwindalo esingqongileyo okoko omnye angayithumeli isiqingatha kwihlabathi liphela.
Eli litye linokutshintshelwa phantse kuwo nawuphi na umbala, lenze amathuba okusetyenziswa kunye noyilo olungapheliyo. Kwinqanaba legranite, umntu unokukhetha islab, ithayile, okanye izixhobo zokubala zemodyuli. I-slab iya kuba yeyona inkulu, ithayile incinci, inemodyuli njengaphakathi. I-Granite iya kufuna ukugcinwa nokutywinwa, kodwa lilitye lendalo kwaye ukubonakala kungumgangatho ophezulu emva koko izinto zokubala ezenziwe ngabantu.
Into ekuphela kwayo emisa nabani na ngoku kukucinga kwabo (kunye nobungakanani begumbi labo lokuhlambela). Olunye ulwahlulo lwegranite nangona ingobunzima obugqithisileyo, obuqhuba ukuhambisa kunye namaxabiso okufaka. Kuya kufuneka ukuba uthathele ingqalelo umda wobungakanani beeslabi ezikhoyo, njengoko iintlobo ezahlukeneyo zegranite zifumaneka kuphela kubungakanani obuthile, ke ngoko abo bafuna ukuba nelitye elingenamthungo kumphezulu wetafile omde banokufuna ukuphinda baqwalasele okanye baphinde bajonge ubungakanani ukubakho kwezinto abazithandayo.
Granite Kwakhona kufuneka zitywinwe kwaye ifuna ulondolozo rhoqo ukuqinisekisa igcina ujongeka emhle. Ixabiso eliphakathi kwethala legranite lisusela kwi- $ 40 ukuya kwi-200 yeenyawo ngonyawo wesikwere ngokuxhomekeke kumgangatho, ubukhulu kunye nobukhulu. Iithayile zeGranite ziya kubiza malunga ne- $ 5 ukuya kwi- $ 15 ngonyawo wesikwere ngelixa iimodyuli zingangama- $ 25 ukuya kwi- $ 50. Ngokomndilili, umntu unokulindela ukuchitha i-avareji ye- $ 2000 ukuya kwi-4500 yeedola kwizinto kunye nokufakwa kwetafile yegranite.
iisuti ezimhlophe zabamakoti
I-Quartz iyafana ngokubonakala kwi-granite, ngelixa i-90% ye-organic kunye ne-10% kuphela ye-pigment kunye ne-binders ezifunekayo ukwenza i-counter. Ezinye iimveliso ezaziwayo ze-quartz zibandakanya iDupoint kunye neCambria. Ukugcina engqondweni ukuba njengelitye lendalo, inkqubo iya kuba kwicala eliphezulu xa kuthelekiswa ne-laminate okanye indawo eqinileyo.
Abanye abantu banokukhetha imiphezulu yeetafile ze-quartz kuba ngokungafaniyo negranite kunye namanye amatye endalo, ayisiyontunja njengoko ibotshelelwe yintlaka, isenza ukucoceka kunye nokugcinwa kube lula. Ukongeza, ngenxa yokuba umphezulu awunamphunga, ucocekile kakhulu njengoko kungekho zimbiwa zincinci zebacteria ukuze zikhule. Enye inzuzo ye-quartz kukuchasana nobushushu bayo - ayigobisi okanye i-warp nokuba inxibelelana ngqo nobushushu, kwaye amanqaku atshisayo anokukhutshwa ngokulula kwisanti. I-Quartz ikwanconywa ngokukrwela kwayo kunye nokuchasana nefuthe- yomelele ngakumbi kunamatye endalo ngenxa yezibophelelo zayo.
Mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo yokususa ekukhetheni itafile ye-quartz iya kuba lixabiso layo. Ibiza kancinci kune granite, kodwa ixabisa ngaphezulu kokuphindwe kabini kunendawo eqinileyo. Ngokuxhomekeke kwi-brand, ixabiso eliqhelekileyo le-quartz liza kuba li- $ 75 ngeenyawo zenyawo, ukuya kwi-100 yeenyawo nganye kwinqanaba le-quartz ephezulu. Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukuba i-quartz ayisiyonto elungileyo yangaphandle-ukubonakaliswa kwelanga ixesha elide kunye nezinye izinto zendalo ziya kutshabalalisa umbala / i-pigment ekuhambeni kwexesha.
IMarble yenye yezona ziqwenga zintle nezintle onokuzifumana ekhayeni labo. IMarble iza nemibala eyahlukeneyo ebandakanya: mnyama, mhlophe, rose, tyheli, ngwevu kunye neminye emininzi. Akukho siqwenga semabhile sifanayo ngoko ke isiqwenga ngasinye ngumsebenzi wobugcisa waso. Imarble ikwangumatshini wokumelana nobushushu onokuthi wenze ukuba kulungele abantu abasebenzisa iimveliso zeenwele ezifudumeleyo (ii-straighteners, curlers, njl.
Ikwangumbandela ofumaneka ngokubanzi, kwaye inokuba lelinye lamaxabiso endalo atshiphu, ngaphandle kokuba ukhetha udidi olufanayo nolweemabula zeCarrara. I-Marble isetyenziswa rhoqo kuyilo kubandakanya i-countertop, ibhafu yokubhabha engqonge kunye ishawa yangasese iziphumo ezigqwesileyo.
Olunye ulwahlulo lwamatye emabhuleni nangona kunjalo yinto enamaphiko, oko kuthetha ukuba ulwelo lungena kwilitye. Oku kunokulungiswa ngokutywina, ekufuneka uyenzile kunye nezinye izinto nangayiphi na indlela. Njengelitye lendalo, i-marble ikwakho nokuchaphazeleka okunokuthetha ukuba le nto ithile kufuneka igcinwe kwigumbi lokulala eliphambili xa kuthelekiswa nendawo yokuhlambela umntwana. Kukwaqhelekile ukukhutshwa, ngoko ke kungcono ukuyigcina kude kwizinto ezinzima, ezinzima ezinokuwaphula.
Ngokomndilili, isabhile yemarble yayixabisa malunga ne-40 ukuya kwi-250 yeedola. Iindleko zokufaka ziya kuxhomekeka kubungakanani, indawo yofakelo kunye noyilo, ke gcinani engqondweni.
Amampunge kwigumbi lokuhlambela kunye nemiphezulu yeetafile zemabula zeCarrara - Jonga eWayfair
I-Laminate ithatha indawo yokonga endaweni yokusebenzisa ilitye lendalo, kwaye ifikile indlela ende kwiminyaka eliqela edlulileyo. UWilsonart noFormica zezinye zezona zinto zihamba phambili ekuveliseni ii-laminate kwaye zinokhetho oluhle olunokwenza ukuba i-countertop ephantsi yohlahlo-lwabiwo mali ibonakale ibiza.
Indawo yokuthengisa yokubala elaminethiweyo iya kuba lixabiso. Ixabisa malunga ne- $ 20 ukuya kwi-36 yeenyawo zenyawo nganye, iyenza ukhetho olufanelekileyo kwabo bakuluhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo. Ikwanemibala eyahlukeneyo yokhetho kunye noyilo. Iilaminates zokugqibela eziphezulu zinoyilo olunokulinganisa amatye endalo ngokunjalo. Xa ifakwe ngobungcali, inokukunika imiphezulu yeetafile ekhangeleka ngathi iyabiza kakhulu. Kukwalula kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuyifaka.
Ngenxa yokuba i-laminate ibhityile, hlala ukhumbula ukuba ayomelele njengelitye okanye i-quartz. Kulula ukonakalisa nokukrwela, kwaye nje ukuba wonzakele umphezulu wokulaminisha, ekuphela kwendlela yokulungisa kukutshintsha ikhava yelaminethi yonke. Abavelisi bokugqibela beLaminate benza ii-laminates ezinobushushu obuninzi kunye nokukrala okunganyangekiyo, kodwa nje ukuba i-laminate yonakele, ekuphela kwendlela yokuyilungisa iya kuba kukubuyisela. Ukuba ujonge ukuphinda uthengise ipropathi, kubalulekile ukuba wazi ukuba ii-countertops ze-laminate azongezi ixabiso ekuthengiseni kwakhona.
Umphezulu oqinileyo ulungile-phakathi xa ukhetha phakathi kokubonakala kunye nexabiso. Umphezulu oqinileyo yimveliso eyenziwe ngumntu egcina ixabiso liphantsi kunye nokufumaneka. Umphezulu oqinileyo nawo awunangxala njenge-quartz, ke ukugcinwa kunye nococeko ayisiyiyo inkxalabo kuba kulula ukuyicoca kunye nokuyigcina. Elinye inqaku lokuthengisa lendawo eqinileyo iya kuba kukufumaneka kobungakanani bayo. Njengoko yinto eyenziwe ngumntu, unokuyifumana ngokulula ngobukhulu obuhlala bungafumaneki kumatye endalo, ukukunceda ukuba wenze umphezulu womphambili wokuphakama,
Ngelishwa, imiphezulu yeetafile yomphezulu eqinileyo inokubakho ukukrwela kunye nokutshisa kwizixhobo ezincinci. Imikrwelo kunye nokutsha kunokususwa kwisanti, nangona kunjalo. Enye into iya kuba lixabiso lokufaka ixabiso layo. Ngokomndilili, ezo zinto zaziza kuba malunga ne-45 ukuya kwi-150 yeedola ngonyawo wesikwere, kodwa ufakelo lwaluya kuba malunga ne-50 ukuya kwi-200 yeedola ngonyawo wesikwere.
Inkqubo yomtshato wamaKatolika isimahla
Umthi lolunye ukhetho kodwa luyinkohliso encinci kwaye kufuneka lwenziwe ngokufanelekileyo ukunqanda ubumdaka. Umthi yinto yendalo echaphazeleka kakhulu kukonakaliswa kwamanzi kunye nokubumba. Xa ukhetha i-countertop yeplanga kwindawo enamanzi amaninzi njengoko ikhawuntare yokuhlambela, kufuneka kuthathwe ukhathalelo olongezelelekileyo ukuqinisekisa ukutywinwa kwezinto.
Uncedo olunomdla kwiitafile zokhuni kukuba inokukunceda ukunciphisa ingxolo nokuba ungagqiba ulahle izinto ezinzima, ezinzima kuyo. Umonakalo unokwenziwa lula ngesanti kwaye ulungiswe, gcina nje engqondweni ukusebenzisa i-sealer efanelekileyo kwinjongo yakho.
Igumbi lokuhlambela elinethayile yeceramic kunye nokwehla kwisinki- Jonga eWayfair
Iitera zeekheram lukhetho olufanelekileyo kwiitafile ngokubhekisele kwiindleko, nangona kunjalo awuyi kufumana uninzi lweetafile zethayile ezifakwe kulwakhiwo olutsha lwasekhaya. I-Tile isezantsi koludweliso lweendleko ngenxa yokuba umntu ekwazi ukuzenza ngokwakhe, kungafuneki ukuba ahlawule abasebenzi ukuze afumane omnye umntu afake.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba iithayile zeceramic zinokukhohlisa ukufaka, kwaye kunokufuna ukusikwa kunye nokuchetywa. Ngapha koko, iithayile zekheram zifuna ukugutywa, kwaye ziya kuthi ngokwendalo ziqokelele ubumdaka kunye nobumdaka ingakumbi xa zingagcinwanga ngokufanelekileyo. Iindleko-ngobulumko, ikhawuntara yethayile yeceramic iya kubiza kuphela i- $ 1 ukuya kwi-30 yeedola ngonyawo wesikwere.
Elona litye lilungileyo kwitafile yokugezela ubukhulu becala ixhomekeke kukhetho lwakho. Siye saxoxa ngaphambili ngexabiso eliphakathi kwaye ezinye zizinto ezilungileyo nezingalunganga, kodwa nazi ezinye zezona zilungileyo zokukhetha amatye ezikhoyo kwiipopathi zokuhlambela:
Granite : Izinto zakudala ezikhethiweyo eziza kufikelela kwi-3,000 imibala / iindidi. Izinto ezomeleleyo kakhulu, kodwa ziyanyibilika kwaye zinokuchaphazeleka ngokuqhekeka kunye nezinye iimpazamo. Ngelixa kubiza, zizinto ezinokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya.
Ilitye lesepha : Eli lilitye lendalo elisandula ukubuya kwizicelo zasekhaya. Ezi zihlala zingwevu mnyama kwaye zigqibelele ngokugqibeleleyo, kwaye zineempawu ezifanayo negranite, yiyo loo nto ihlala isetyenziswa njengendawo ebambeleyo. Nangona kunjalo, eli litye lithanda ukuba mnyama / liphuhlise ipatina ngokuhamba kwexesha.
Isilayidi Isilayiti lelinye ilitye lendalo elilingeneyo lenyengane nemabhile, njengoko ifikeleleka ngakumbi kwaye inethuba lokuba ingabi yimathiriyeli. Inobuchule obufanayo njengegranite ngokuzinza kwayo, ukukrwela kunye nokumelana nobushushu, kodwa ngesibonelelo esongeziweyo sokungabinantunja, okwenza kube lula ukuyigcina. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nemarble kunye negranite onokuthi ubanike ukukhanya okuphezulu, izibalo zesilayiti ziyaziwa ngokubonakala kwazo ngokukodwa.
Ngokungafaniyo negranite kunye nemarble, eli litye alinangxangxasi, kwaye linombala ofanayo. Ikwahlala ixesha elide kakhulu kwaye iyakwazi ukumelana nobushushu. Awunakulindela umbala ofanayo kulo naluphi na uhlobo lwamatye endalo. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa negranite kunye nemarble, isileyiti inokutshintsha okufihlakeleyo kokufaka imibala, okwenza kube lula ukwenza ukubonakala okufanayo.
Enye yeengxaki ezinkulu ezinokubangela ukuba ukhethe umbala. Ixabisa malunga ne- $ 60 ukuya kwi-200 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kubandakanya neendleko zokufaka, iyenza ibe lelinye elinomtsalane ilitye lendalo.
Marble : Ngephanyazo inika iklasikhi, ukujonga okungaphelelwa lixesha kuyo nayiphi na indawo. Ngelixa usengozini yokuchaphazeleka ngamabala kunye nokukrwela, kunye nezitywina ezifanelekileyo, unganceda ukugcina nawuphi na umphezulu wemarble ukuze uhlale ujongeka njengokutsha.
Quartz Ikwabizwa ngokuba lilitye lobunjineli. Ihlala ixesha elide, kodwa ikwanokubiza kakhulu. Nangona kunjalo, ikunika esona sicelo siguquguqukayo njengoko sinokwenziwa ngokwesiko nakuphi na ubungakanani okanye imilo.
Njengoko kukhankanyiwe ngokufutshane apha ngasentla, imiphezulu yeetafile yokhuni lukhetho olusebenzayo ngokupheleleyo kwiikhawuntari zangasese Abantu abaninzi bayoyika yingcinga yokuba namanzi naphina kufutshane neenkuni, kwaye banelungelo lokuthandabuza.
Umthi yinto yendalo kwaye oku kuthetha ukuba xa ungatywinwanga ngokufanelekileyo izinto ezinjengokubola, ukungunda kunye nokukrwela kungazisa iikhawuntari ukuba zingaphantsi kobume bepristine. Ukutywina i-countertop yeenkuni lelona candelo libalulekileyo ekugcineni indawo ehlala ihleli. Ukutywina kunokuba yinto umntu angafuni ukuyenza rhoqo. Nangona kunjalo, uninzi lweendawo ezibandakanya zonke izinto zendalo ziya kudinga ukuba zitywinwe ukuze zikhuseleke kwaye zigcinwe zintle.
Owona mthi ulungileyo oza kuwusebenzisa kwindawo yokumisa kwindawo yokuhlambela uya kuba ngumthi onzima wemephu, oku kuyakwenza ukuba ibhlogi yokubulala ibonakale kwiikhawuntari. Imephu enzima ineenkozo ezichanekileyo kwaye yenye yeemithi ezomeleleyo xa isiza ekuchaseni kwayo ukukrwela kunye nokuqina okuzinzileyo.
Ukuba isitayile sebhloko sosira asiyiyo inkangeleko enqwenelekayo, nawuphi na umthi onzima uya kulungela i-countertop yokuhlambela. Ubunzima bomthi, kokukhona ukuxhathisa ukungonakali kunye nokubangcono kokuqina kweenkuni. Rhoqo imithi elukhuni isetyenziswa kwifenitshala ke ukukhangela iinkuni ezisetyenziswa kulolo hlobo lokwakha kunokuba sisiqalo esihle.
Izinto ezithandwayo zokubala iinkuni zibandakanya:
Ukunyusa : Njengomthi owomeleleyo waseMelika, uHickory unokuzifumana esekhaya kwigumbi lokuhlambela ekucingelwa ukuba linokunxiba kakhulu kunye neenyembezi.
Teak : Inikezela ngombala ongaqhelekanga, kunye neeoyile zendalo ezenza ukuba kuthintele ukufuma.
Umdaka omnyama Umbala unokuhluka nge-walnut, kodwa unepateni enkulu yokutya okuziinkozo kuwo kwaye ulukhuni.
Tigerwood : Ukuba yenye yezona mithi zinzima ukuzinza akukho mbuzo.
Uqalo : I-Eco-friendly top kwi-wishlist? I-bamboo yeyangoku kunye nezixhobo ezinokuphinda zihlaziyeke kwakhona ezinokuba yindawo ekumelana nayo ngokugqibeleleyo.
Beech : Ukufikeleleka, i-aesthetics, kunye neenkuni ezikhoyo ngokubanzi, i-beech ibambelela yomelele. I-Beech nayo inokungcoliswa ngokulula ukuze ilingane kuyo nayiphi na inkangeleko yeminqweno yangasese.
Ukuba ungathanda ukubona iintlobo ngeentlobo zemathiriyeli yokuseta kuyilo olukhoyo Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo ezikhoyo zokunceda ekuboneni izimvo zakho. Uninzi lwezi nkqubo lukuvumela ukuba ulayishe umfanekiso wendawo yakho kwaye uzame ukugqitywa okungafaniyo, izixhobo kunye nemibala ukuze ubone eyona nto uyithandayo kwiprojekthi yoyilo.
umtshato wamkelekile amagama esimemo sepati
Kubiza malini ukutshintsha igama lakho kwi-colorado
Ixesha lesibini ejikeleze iilokhwe zomtshato